प्रचण्डका दुई विश्वासपात्रबीच बोलचाल बन्द ! « Pahilo News
प्रचण्डका दुई विश्वासपात्रबीच बोलचाल बन्द !
प्रकाशित मिति : 8 September, 2016 10:00 am
२३ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का दुई विश्वासपात्रबीच नै केही महिनायता बोलचाल बन्द छ । प्रचण्डले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मावीच प्रदेश नं ६ को नेता को बन्ने भन्ने लडाइँका कारण द्वन्द्व बढेको हो ।
अचम्म त के छ भने कुनै समय चाहिँ यी दुई नेता प्रचण्डका विरोधी थिए । यी दुईका साथै नेत्रविक्रम चन्द र खड्गबहादुर विश्वकर्मा रहेको एउटा सानो समूहले प्रचण्ड विरोधी कित्ता बनाएको थियो । त्यो समूहलाई माओवादीभित्र ‘ग्याङ अफ फोर’ का नामले चिनिन्थ्यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयनबित्दै यो समूहले नेपालगञ्जमा बसेर प्रचण्डका विरुद्ध योजना नै चलाएको माओवादी नेताहरु अझै स्मरण गर्छन । यी चारमध्ये चन्द र विश्वकर्मा प्रचण्डसँग छैनन् भने बस्नेत र शर्मा प्रचण्डका खास विश्वासपात्र बनेर उदाए ।
तर पछिल्लो समयमा संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतातिर गएपछि प्रचण्डका यी दुई विश्वासपात्रबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन थालेको माओवादी निकट स्रोतले बतायो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाइएपछि शर्माले सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न बाँकी राखेनन् । पार्टीका कैयौँ बैठकमा शर्माले बस्नेतलाई मन्त्रिमण्डलवाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने कुरासमेत उठाए ।
अहिले बस्नेत सरकार बाहिर छन् भने नयाँ सत्ता समीकरणमा सक्रिय रहेका शर्मा मालदार मन्त्रालय (ऊर्जा) रोजेर सरकारमा पुगेका छन् । माओवादी स्रोतका अनुसार, बस्नेतकै रिसले अरु जति मन्त्रालय दिएर भए पनि गृह माओवादीसँग राखेर मन्त्री बन्न शर्माले निकै जोडबल गरेका थिए । तर, कांग्रेसले नमानेपछि उनले रोजेर ऊर्जा मन्त्रालय लिएका थिए । अहिले बस्नेतले युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाइलीलाई शर्माविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ । रुकुमकै श्रीपाइली जिल्लामा पनि शर्माविरोधी मानिन्छन् ।
यी दुई नेताबीच वीच यो तहको टकराव उत्पन्न हुनुका पछाडि ६ नं प्रदेशको नेता को हुने भन्ने होड नै प्रमुख रहेको बताइन्छ । अरु प्रदेशमा पार्टीभित्रै दुईभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी नेता भए पनि ६ नं प्रदेशमा बस्नेत र शर्मा मात्र दुई जना नेता छन् । स्रोतले भन्यो, ‘रुकुम ५ नं प्रदेशमा परेको भए पनि उनीहरुबीच यस्तो लडाइँ हुने थिएन । किनभने, त्यहाँ कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायतका नेताका अगाडि उनीहरुको केही लाग्ने थिएन ।’ त्यही डरले पनि रुकुमलाई प्रदेश नं ६ मा मार्न पार्टीभित्र शर्माले भूमिका खेलेको माओवादी स्रोतले बतायो ।
यी दुवै प्रचण्डका विश्वासपात्र भएपनि पछिल्लो समयमा शर्माले बस्नेतलाई पछाडि पारिसकेको बताइन्छ । ‘प्रचण्डको स्वभाव नै पैसा बुझाउने र घुमाउनेलाई बाहेक अरुलाई नच्याप्ने छ’, माओवादी निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यही बुझेर शर्माले प्रचण्डलाई हात लिएका हुन्. ।’
शर्माले गत बैशाखको दोस्रो साता प्रचण्डलाई हेलिकोप्टरमा रारा घुमाएका थिए । प्रचण्डलाई खुसी पारेका शर्माले केन्द्रीय कमिटी विस्तारका क्रममा ७६ जना रुकुमका मात्रै पारेको बताइन्छ । बस्नेत चाहिँ प्रचण्ड अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख स्वकीय सचिव नै बनेका थिए भने यसअघि उनकै विश्वास जितेर गृहमन्त्री बनेका थिए । यी दुबै नेता सीमा जोडिएका जिल्लाका हुन् । शर्माले रुकुम र बस्नेतले जाजरकोटबाट चुनाव जितेका छन् ।